Iindaba ezivela kwi-HBO kunye neMovistar + kaJuni 2018 | Iindaba zeGajethi
Iindaba ezivela kwi-HBO kunye neMovistar + kaJuni 2018
UIgnacio Sala | | Iimuvi kunye nothotho, Ukusasaza
Ihlobo liza kwaye nangona ixesha lisimema Phuma ebusuku Endaweni yokuhlala ekhaya, oku akuthethi ukuba ukusasaza iinkonzo zevidiyo ziyeke ukwandisa umxholo abasinika wona inyanga nenyanga. Izolo sikuxelele ngayo yonke into Iindaba eziza kwiNetflix ngoJuni.
Ngoku lithuba le-HBO kunye neMovistar +. Nangona abasebenzisi abaninzi becinga ukuba i-HBO kuphela Umdlalo weZihlalo zobukhosi, le nkonzo yevidiyo ifunwayo, njengeMovistar + ikwasinika imixholo eyahlukeneyo kuthotho nakwimiboniso bhanyabhanya, engabanzi njengeNetflix kodwa ilunge kakhulu. Apha ngezantsi sikunika i Iindaba ezivela kwi-HBO kunye neMovistar + kaJuni 2018.
1 Iindaba zeHBO zikaJuni 2018 kuthotho
2 Iindaba ze-HBO zikaJuni 2018 kwiiMuvi
3 Iindaba zeHBO zikaJuni 2018 kumxholo wabantwana
4 Iindaba zeMovistar + zangoJuni 2018 kuthotho
5 Iindaba zeMovistar + zangoJuni 2018 kwiifilimu nakumaxwebhu
Iindaba zeHBO zikaJuni 2018 kuthotho
Ukuba uthanda ii-comics, kwaye uyazi ukuba awuhlali nje kwiMarvel, i-HBO yenza ukuba uthotho lube nokufumaneka kuthi Mshumayeli, uthotho olusekwe kwiqhula eligama elifanayo elipapashwe nguVertigo (DC Comics). Ixesha lesithathu lolu ngcelele luyafumaneka kwi-HBO ukuqala nge-25 kaJuni.
Gomorra, Olunye lothotho oludumileyo kwiminyaka edlulileyo, lufika ngamaxesha alo okuqala amathathu kwi-HBO ngoJuni 3. Olu luhlu lujongana nengxaki yobundlobongela emantla eNaples yiCamorra, isibonisa ukungqubana phakathi kwezindlu zeSavastano nezaseConte.
Kodwa, ukubheja okukhulu kwe-HBO kule nyanga kukuPhumelela kunye nokuPhumelela. Phela isethwe kwii-80s kwaye isibonisa umxube woluntu lwaseNew York ngelo xesha, ukuzalwa kwexesha likaTrump, imeko yentlalo ... Olu luhlu lwenziwe nguRyan Murphy Eyona nto iphambili kubalingisi be-LGBTQ abathathe inxaxheba kuthotho lweentsomi. Iyafumaneka ngoJuni 4.
UlandelelwanoKwelakhe icala usazisa kusapho lakwaRoy nakubantwana babo abane. Olu luhlu luphonononga iziqendu zopolitiko, imali, amandla, usapho ... kunye neeplani eziza kuyilwa ukubona ukuba ngubani oza kuba yindlalifa yendoda yosapho. Iyafumaneka nge-11 kaJuni.
Iindaba ze-HBO zikaJuni 2018 kwiiMuvi
Amistad. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ngomso. Ifumaneka ukusuka nge-8 kaJuni.
Uzwilakhe. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Isigqubuthelo esipeyintiweyo. Ifumaneka ukusuka nge-11 kaJuni.
Ebumnyameni. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
I-Eurotrip. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ifayile 39. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ifayile yaseWarren: Ityala lase-Enfield. Ifumaneka ukusuka nge-17 kaJuni.
Amagorha ngaphandle komjikelo. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ihlathi 4.0. Ifumaneka ukusuka nge-22 kaJuni.
Isiphelo sendlela. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Umtshato osisinyanzelo. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
UPhillip Morris ndiyakuthanda! Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Iphepha lokubhala ndiyakuthanda. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ubukho obungaqhelekanga. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ukuziphakamisa. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Ubudlelwane obuyimfihlo. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Amathambo aLuthando. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Umntu omdala oMncinci. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
I-Zoolander. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Unyaka olungileyo. Ifumaneka ukusuka nge-1 kaJuni.
Iindaba zeHBO zikaJuni 2018 kumxholo wabantwana
UBen & holly. Ixesha loku-1 likho ngoJuni 1
Bugs, i-adventure encinci. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Ukubuyela umva. Iyafumaneka nge-15 kaJuni
I-Ice Age 3: imvelaphi yeedinosaurs. Iyafumaneka nge-15 kaJuni
IYunivesithi yaseMonsters. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Iimaski zePJ. Ixesha loku-1 likho ngoJuni 15
Ulwandle lolutsha 2. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Imuvi yaselwandle Yabatsha. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Ikhangaru eqine kakhulu. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
I-Wall-E. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Iindaba zeMovistar + zangoJuni 2018 kuthotho
I-HBO iqala ukubuyisa Umyolelo kunye noGrace, uthotho olusasaze phakathi kuka-1998 no-2006 ngaphezulu kwama-8 amaxesha. Ukuqala ngoJuni 1, siya kuba nakho ukonwabela ixesha lesithoba, ixesha eliza emva kweminyaka eli-12 emva kokuphela kothotho.
IMovistar + iyaqhubeka nokubheja kwimixholo yoqobo kwaye ukusukela ngoJuni (umhla osaza kuqinisekiswa) iya kuqala inqaku Ngomso, uthotho olusekwe kwinoveli ka-Ignacio Martínez de Pisón obalisa ibali lomfana ofike e-Barcelona kwi-60s apho wadibana khona nomlingisi kunye nepolisa elivela kwi-Social Brigade, apho iintlola kunye namaqela kaFranco ayexubekile. kulingana. Ixesha lesine le I-Affair izakufika eMovistar + ngoJuni 18.
Iindaba zeMovistar + zangoJuni 2018 kwiifilimu nakumaxwebhu
¡Umama! Iyafumaneka nge-15 kaJuni
Umqhubi weteksi. Iyafumaneka nge-7 kaJuni
UAnabelle: Indalo. Iyafumaneka nge-22 kaJuni
Ukubulala kwi-Express Express. Iyafumaneka nge-29 kaJuni
Indawo yesine. Iyafumaneka nge-27 kaJuni
UNjingalwazi Marston kunye noMfazi oMangalisayo. Iyafumaneka nge-9 kaJuni
Imfihlo kaMarrowbone. Iyafumaneka nge-11 kaJuni
U-Eric Clapton, ingcwele yokhuseleko lweeblues. Iyafumaneka nge-21 kaJuni
Usuku lokufa olumnandi. Iyafumaneka nge-24 kaJuni
Amabala uJones: I-Panther yePop. Iyafumaneka nge-11 kaJuni
Inyanga kaJupiter. Iyafumaneka nge-29 kaJuni
Umculo kaRyuichi Sakamoto. Iyafumaneka nge-4 kaJuni
NguLey Hamilton. Bamba onke amaza. Iyafumaneka nge-5 kaJuni
Isikhumba. Iyafumaneka nge-26 kaJuni
IMeya. Iyafumaneka ngoJuni 12/06)
I propaganda. Iyafumaneka nge-1 kaJuni
Ngaphandle (Umzila). Iyafumaneka ngoJuni 14 06)
Square. Iyafumaneka nge-20 kaJuni
UTro: uRagnarok. Iyafumaneka nge-8 kaJuni
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » Iindaba ezivela kwi-HBO kunye neMovistar + kaJuni 2018
I-PUBG Corp. imangalela i-Fortnite ngokophula umthetho